10 Best Zoo Kushanyira With Your Kids In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Best Zoo Kushanyira With Your Kids In Europe
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 27/11/2020)
Kufamba nevana kuEurope kunogona kunetsa. saka, zvakakosha zvakanyanya kuwedzera zviitiko zvishoma izvo vana vanganakirwe nazvo, sekushanya kune imwe ye 10 Zoo dzakanakisa muEurope. Mimwe yenzvimbo dzakanakisisa dzepanyama dziri muEurope. Mumoyo ma maguta akanakisa mu Europe, kune nzvimbo dzakasvibirira, uye 10 Zoo dzakanakisisa dzekushanyira nevana muEurope.
1. Schonbrunn Zoo MuVienna
Schonbrunn Zoo muVienna, iri zvakare kumba ku 500 mhando dzemhuka, kubva 1752. Semuyenzaniso, zoo yakare muEurope inogara nzou yeAfrica uye hofori panda. The 42 acres Viennese zoo iri mukati memuzinda uye ine zvimwe zvinoshamisa zvinokwezva zvevana nevabereki.
Semuyenzaniso, imba inonaya mvura mumasango inochengetwa mhuka inzvimbo inotyisa inogadzirwa nevanhu yesango remvura chairo rine mabhanan'ana. Sezvaunofamba-famba uchitenderera kuti uchengete ziso kune maAsia madiki-akatsemurwa otters uye vampire crabs. Pamusoro pe, Polar bere imba, ingwe uye cheetahs, koala imba uye dzimwe dzimba zhinji dzemhuka dzinoshamisa dzakakumirira.
Mukova weSchonbrunn Zoo muVienna wakasununguka nepasipoti yeVienna. Unogona kusvika ikoko neU4 Hietzing pasi pevhu.
Florence kuenda kuVenice Chitima Mitengo
Treviso kuVenice Chitima Mitengo
2. 10 Best Zoos In Europe: Alpine Zoo muInnsbruck
Inowanikwa mune inoshamisa Kudzvinyirira muAustria, zoo yeAlpine muInnsbruck iri kumba kune zvinopfuura 150 mhuka marudzi. You’ll find this amazing zoo at the foot of the Nordkette mountain range in the Austrian Alps. saka, kana uri kuronga rwendo rwemhuri kuAlps, ita shuwa yekuwana nguva yeAlpenzoo Innsbruck.
Vana vako vaizoshamiswa chose nemabheya mashava, Lynx, makondo endarama, otters, uye moto salamander. Aya angori mashoma emhando dzemhuka dzaunozoona muAlpine zoo. Ipo vana vako vachange vachiyemura mhuka, iwe uchatorwa ne dzinokatyamadza maonero.
Unogona kusvika kune ino inoshamisa zoo iri nezvifambiso zvevoruzhinji, kubva ku pakati peguta. Uyezve, kune akasiyana bhajeti-anoshamisira zoo kupfuura sarudzo, saka unogona kuona zvese.
Munich kuInnsbruck Chitima Mitengo
Salzburg kuenda kuInnsbruck Chitima Mitengo
Oberstdorf kuenda kuInnsbruck Chitima Mitengo
Graz kuenda kuInnsbruck Chitima Mitengo
3. Iyo Zoo Yakanyanya MuCzech Republic: Prague Zoological Bindu
Prague inozivikanwa nemabhiriji ayo anoshamisa, maonero anoyevedza, akitekicha, nemapati. zvisinei, havasi vanhu vazhinji vanoziva nezve Prague zoo, uye ndiyo nzvimbo inokudzwa pakati pezvivakwa zveEurope zvakanakisa zvekushanyira nevana.
o.5 mativi emakiromita anoita Prague zoo imwe yemahombe makuru muEurope, dzimba dzinopfuura 4000 mhuka. saka, kune akawanda matende uye mhuka dzekukwazisana, semuyenzaniso, Shanti nzou yekuAsia, Bikira, gorilla rine hushamwari, uye dzakawanda dzakawanda dzakasarudzika uye dzakanaka mhuka.
Prague zoological gadheni rakavhurika zuva nezuva uye rinowanikwa ne bhazi kana tramu. Zano redu rekunakidzwa kwemhuri muPrague kuronga kuzara kwemhuri-rwendo rwemhuri kuenda kuPrague zoo nekuti vana vako vangangoda kuongorora zvese.
Nuremberg kuPrague Chitima Mitengo
Munich kuPrague Chitima Mitengo
Berlin kuenda kuPrague Chitima Mitengo
Vienna kuenda kuPrague Chitima Mitengo
4. 10 Best Zoos In Europe: Berlin Zoological Bindu
The oldest zoo in Germany is home to some of the extraordinary animals in the world. The Chilean flamingo and African Penguin are just a few of the special residents you’ll meet on your family visit to the Berlin zoo. Mhuka dzakajairika uye dzinojairika dzinoita kuti Berlin ive imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushanyira nevana vako muEurope.
Berlin Zoological Garden iri pakati peimwe ye maguta anonakidza kwazvo muEurope, uye zoo haisi iyo yega. Kana iwe uri mutown kwevhiki refu, saka unofanirwa kunyatsoita nguva yezuva ku zoo, matende, uye akwariyamu.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve zoo iyi ndechekuti zviripo matiketi akasarudzika yemhuri diki kana hombe, kupinda kumwe ku zoo, kana combo ine mukova weiyo aquarium.
Frankfurt kuBerlin Chitima Mitengo
Leipzig kuBerlin Chitima Mitengo
Hanover kuBerlin Chitima Mitengo
Hamburg kuBerlin Chitima Mitengo
5. Zoo Yakanyanya Kupfuura MuHamburg: Hagenbeck Zoo
Hamburg yakanaka guta-mabhureki ekuenda, uye guta rinonakidza rekushanyira nevana. IHagenbeck Tierpark muHamburg mumwe muenzaniso wezvinhu zvinonakidza zvekuita muHamburg nevana. Ndiyo imwe yenzvimbo dzinotonhora kupfuura dzose muEurope neGermany. Imba yakavhurika imba kune zvinopfuura 1,800 mhuka, zoo inoyevedza ine Arctic Ocean. Iyo Arctic Ocean ndipo paunotanga chiitiko chemhuri, uye shanyira polar mabheya, Penguin, uye mabheya egungwa.
Kana iwe uri muHamburg kwemazuva mashoma, ipapo iwe unofanirwa kuwana iyo Hamburg Kadhi. Nenzira iyi iwe unonakidzwa nekutepfenyura kukuru pa wokukwezva vashanyi, uye kudzikisira pazu uye tropical aquarium mune zoo.
Berlin kuHamburg Chitima Mitengo
Bremen kuHamburg Chitima Mitengo
Hanover kuenda Hamburg Chitima Mitengo
Cologne kuenda Hamburg Chitima mitengo
6. Antwerp Zoo MuBelgium
Imwe yepamusoro 10 Zoo dzakanakisa muEurope ndiyo Antwerp Zoo. Kungofanana nechero ipi inoshamisa zoo pane yedu runyorwa, muAntwerp Zoo unogona kuyemura mhuka dzakanaka kwazvo pasi rese. zvisinei, chimwe chezvinhu chinosiyanisa Antwerp Zoo kubva kune mamwe macoo, ndiyo yakasarudzika Chirongwa chemhuka dziri mungozi, sebhonobos uye okapi.
Zoo dzakanakisa muBelgium dzakawedzera zvakanyanya mukati memakore. Iyo zoo yakakura zvakanyanya zvekuti hapana pakati peguta, padhuze neCentral station. Uyezve, iyo zoo's Skywalk icharatidza zvakanyanya kuona kunoshamisa yemagadheni uye imwe yeiyo kure-iyo-yakarohwa-nzira maguta muEurope.
Brussels kuenda kuAntwerp Chitima Mitengo
Amsterdam kuenda kuAntwerp Chitima Mitengo
Lille kuenda kuAntwerp Chitima Mitengo
Paris kuenda kuAntwerp Chitima Mitengo
7. Sravana Sameeralu Serial 26t Les Mathes, Furanzi
Iyo yakanaka Les Mathes zoo muLa Palmyre iri mumasango akasvibira nemadunduru. Kune nzira dzakatarwa dzinokutora iwe nevana parwendo rwakatenderedza nyika yemhuka uye zvishamiso zvechisikigo mune imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuchengetedza muEurope..
Shumba dzemugungwa dzesango nekatsi dzemusango, Carreabean flamingos, uye hofori hamba, ndedzimwe shoma dzemhuka dzakasarudzika dzauchasangana nadzo. Iyi zoo inoshamisa iri muNew Aquitaine dunhu muFrance, pamhenderekedzo yeAtlantic, a great adventure from Paris nechitima.
8. Artis Zoo MuAmsterdam
Just 15 maminetsi kubva pakati peguta, iwe uchawana zoo yekutanga muAmsterdam uye imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzemhuka kuEurope. Artis Royal Zoo inogara kumba kwembizi, butterflies, hove dzinopisa, uye zvidiki zvidiki izvo zvinokwezva vana vako, pa ARTIS-Micropia.
A kushanyira zoo yeAmsterdam ndechimwe cheakanakisa zviitiko zvemhuri zvekuita muAmsterdam. Nema pavilion akawanda, kune aquarium, nemiti yemiouki yakare, iyo Artis Zoo muAmsterdam ndeimwe yeanoyevedza uye nzvimbo dzakakosha dzekushanyira kana uri muNetherlands.
Zviri nani utenge tikiti yeArtis Zoo neMicropia kuti unakirwe nezvose zvinopihwa neAmsterdam Royal zoo.
9. Zoo Yakanakisa MuEngland: Chester Zoo
Zoo yakakura muEngland iri mu Cheshire uye musha kune vanopfuura 35,000 mhuka. Chester zoo ndomumwe weakanakisa zoo muEurope yekushanyira nevana vako sezvo paine mhuka dzakawanda uye mapindu ekutsvaga.. Kune mhuka dzinobva kumativi ese epasi, kunge lemurs, nyanga huru, runyanga, uye dzimwe mhuka dzakawanda dzakasarudzika.
wo, kana uine nguva yekuwedzera mhuri yako kubuda, ive shuwa yekushanyira akanaka mapindu mune zoo. Iko kuunganidzwa kwemaruva muChester zoo kune zita rinozivikanwa pasi rese, uye orchids akasiyana zvachose. Kushanyira kuChester zoo ndiyo yakakwana mhuri yekunze chiitiko.
10. Best Zoos In Europe: Basel Zoo MuSwitzerland
Zoo yakanakisa muSwitzerland iri mumoyo weBasel. Basel zoo musha wemhuka dzinobva kutenderera pasirese, uye iwe uchawana mhuka imwe neimwe mumugari wayo wepanyama mumakomba akasiyana.
Chimwe chinhu chinoshamisa chinoisa Basel zoo pane yedu 10 Zoo dzakanakisa muEurope, zoo yevana. Pano vana vako vanowana mukana unokosha wekusangana nezvipfuyo zvepasirese, dzinovaraidza, uye vapei chikafu.
Kushanyira zoo chiitiko chinoshamisa chekunze kwemhuri yese. Green magadheni nemasango, mhuka dzinoshamisa nemiti, inonakidza uye inonakidza vana. The 10 Zoo dzakanakisa muEurope kushanyira nevana vako, ndiwo matombo akavanzika eEurope, uye akakosha kanenge kuzere-kwezuva-rwendo.
Munich kuBasel Chitima Mitengo
Zurich kuBasel Chitima Mitengo
Bern kuBasel Chitima Mitengo
Geneva kuBasel Chitima Mitengo
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga kushanya kunoshamisa kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzakanakisisa muEurope nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Zvakanakisa Zoo Kuti Ushanyire Nevana Vako MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
ushingi BestzoosEurope EuropeTraveling Europewithkids www vana Train Travel Travelingwithkids zoo
How To Gara Wakachengeteka Nepo Driving Munguva Winter
Car Kufamba Matipi, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe